ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၄-၇-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၄-၇-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- မော်ကျွန်းမှာ တောင်သူ ၄ ဦး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရ click
- လယ်သမားအခွင့်အရေး ကာကွယ်ပေးဖို့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေ တိုက်တွန်း click
- လယ်သမားတွေအတွက် ဥပဒေပြဌာန်းပေးဖို့ ၈၈ ကျောင်းသားတွေ တောင်းဆို click
- လယ်သမားအခွင့်အရေး ကာကွယ်ပေးဖို့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေ တိုက်တွန်း (ရုပ်သံ) click
- လယ်သမားအကျိုးစီးပွား ဥပဒေကြမ်း အကြံပြုရှင်းလင်း (ရုပ်သံ) click
- အမေရိကန်အစိုးရက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးကို အမည်ပျက်စာရင်းသွင်း click
- အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာ ဖြေရှင်းပေးဖို့ သမ္မတထံ စာရေးသား တောင်းဆို click
- ဝ တပ်စခန်းကို ဆုတ်ခွာဖို့ အစိုးရတပ် အမိန့်ပေး click
- UWSA နဲ့ အစိုးရစစ်တပ် စစ်ရေးတင်းမာ click
- နည်းပညာအကြံပေးရုံး ဖွင့်ဖို့ KIO အဖွဲ့ မြစ်ကြီးနား ရောက် click
- ကေအိုင်အို လုပ်ငန်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းစတင် click
- ကချင်ပြည်နယ်က ရှမ်းလူမျိုးတွေအရေး ဖြေရှင်းဖို့ ကော်မတီဖွဲ့စည်း click
- အကြမ်းဖက်ဝါဒ ကျင့်သုံးသူတွေကုို မေတ္တာမပို့နိုင်ပါ (ဦးဝင်းတင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း) click
- ရခိုင်ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေး ကူညီပေးသွားမယ်လို့ နယူးဇီလန် ကတိပြု click
- မွတ်စလင်ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းပေးဖို့ အသင့်ရှိကြောင်း OIC ကြေညာ click
- Time မဂ္ဂဇင်းစာစောင် သီရိလင်္ကာ ပိတ် click
- ဘာသာပေါင်းစုံ ခေါင်းဆောင်တွေ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေး click
- ဘာသာပေါင်းစုံ ညီညွတ်ရေး ဟောပြောပွဲ (ရုပ်သံ) click
- ၈၈၈၈ ငွေရတုအခမ်းအနား အားလုံး ပါဝင်ဖို့ လို (ရုပ်သံ) click
- ရှစ်လေးလုံး ၂၅ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပရေး (ရုပ်သံ) click
- ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံ ကနေဒါ-မြန်မာ့မိတ်ဆွေများအဖွဲ့နဲ့ မေးမြန်းချက် (အသံ) click
- CFOB ကိုတင်မောင်ထူးနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် (ရုပ်သံ) click
- မအူပင်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် (ရုပ်သံ) click
- ၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး (ရုပ်သံ) click
- ဇူလိုင် ၇ ရက်၏ သမိုင်းတရားခံများ (ဆောင်းပါး) click
- ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ click
- စဉ်းစားစေချင်တာတွေ (၁) - ကင်ဆာကို ကြိုတင်စစ်ဆေးပြီး ကာကွယ်ပါ click
- ဖေဖေ မောင်ဝံသရဲ့ လက်ရှိ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ click
- ဖေးမကူညီ လက်တွဲမည် (ပေါင်းတည်မြို့ အမျိုးသမီးများအသင်း) ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက်သို့ စာအုပ်များလှူ click
- သာသနာ့ မောလိ ပဋ္ဌာန်းဝတ်ရွက်သင်း (ဆောင်းပါး) click
- ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီး ရှိသေးတယ် - အမှတ် (၄၈၈) click
- အနာဂတ် ပထ၀ီ (ကာတွန်း) click
- အီဂျစ် အာဏာသိမ်းမှုဂယက် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ရိုက်ခတ် click
- အီဂျစ်စစ်တပ် တိုင်းပြည်အာဏာကို ထိန်းချုပ် click
- အီဂျစ်မှာ အခြေခံဥပဒေ ယာယီရုပ်သိမ်း click
- တပ်ကြေညာချက်ကို အီဂျစ်ပြည်သူတွေ စောင့်ဆိုင်း click
- အီဂျစ်မှာ စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရကြား တင်းမာမှု အရှိန်မြင့် click
- စနိုဒန်ကြောင့် လေယာဉ်ဆင်းခိုင်းမှု Austria ကို Bolivia ဝေဖန် click
- အမေရိကားရဲ့ “မဲပေးခွင့်ဥပဒေ” ကို ဗဟိုတရားရုံးက ပယ်ချလိုက်ပြီ click
- အိန္ဒိယမှာ ရိက္ခာ ဈေးလျှော့ရောင်းမယ် click
- အာချေး မြေငလျင် လူ အနည်းဆုံး ၂၄ ဦး သေဆုံး click
- လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် ကမ္ဘာ့အပူဆုံးအဖြစ် စံချိန်တင် click
- HIV ကုသဖို့ နည်းလမ်းသစ် တွေ့ click
- ရာဇ၀င်တွင်ခဲ့တဲ့ Gettysburg တိုက်ပွဲ (ရုပ်သံ) click
ကလေး တမူး ရဲတွေလိုပဲ အာဏာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တလွှဲ
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ Website မှာ ကျွန်မ လွန်ခဲ.တဲ.
၃ - ၄ လလောက်က comment တစ်ခုဖတ်လိုက်ရပါတယ် ။
SEA GAME အတွက်အားကစား သမားတွေရွေးခြယ်မှု
စနစ် မှားယွင်းနေကြောင်း ၊ စားပွဲတင်တင်းနစ် မှာဆို
နေပြည်တော်မှာ သွားရောက်အရွေးမခံနိုင်သူ ၊ training
မဆင်းနိုင်သူ အများအပြားရှိပြီး ၊ နေပြည်တော်မှာ ရွေးထားတဲ. မြန်မာ.လက်ရွေးစင်
စားပွဲတင်တင်းနစ် ကစားသမားများ အရည်အသွေး နိမ်.ကြောင်း ၊ ရန်ကုန်၊ မော်လမြိုင် မှ ကစားသမား များ
နဲ. ပြည်လည်ယှဉ်ပြိုင် ရွေးခြယ်သင်.ကြောင်းဖတ်ခဲ.
.. သက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ များရဲ. စီစဉ်မှုအရ
နေပြည်တော်မှာ ရွေးထားသောပဏာမ စားပွဲတင်တင်းနစ်လက်ရွေးစင်များ၊
ရန်ကုန် ၊ မော်လမြိုင်၊ ဧရာဝတီ ၊ကရင် စတဲ. ပြင်ပ
ညွန်.ပေါင်းအားကစားသမားများ ၊ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ မှ
စားပွဲတင်တင်းနစ်အားကစားသမား ၂ သင်း တို.
၂၉.၆.၁၃ မှ ၁.၇.၁၃ နေ.ထိ ရန်ကုန်မှာ ၃ ရက် အသင်းလိုက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ.ရာမှာ ရန်ကုန် ၊ မော်လမြိုင်၊ ဧရာဝတီ ၊ကရင် စတဲ. ပြင်ပ
ညွန်.ပေါင်းအားကစားသမားများ ကအတန်း ၂တန်းစလုံး
မှာ ဗိုလ်စွဲခဲ.ပြီး ထိုင်ဝမ် ကလပ်၂သင်းမှ ဒုတိယ ရခဲ.တာတွေ.ရပါတယ် ။
ကျွန်မဆိုလိုချင်တာက နိုင်ငံတော်အနေနဲ. ပြည်သူတွေရဲ. ထောက်ပြဝေဖန်မှု များကိုလည်း စီစစ်